China Wholesale 3 Nylon otomatiki musoro Vatengesi nevatengi - GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.
Kumba > Zipper musoro > Zingi chiwanikwa otomatiki musoro > 3 Nylon otomatiki musoro
3 Nylon otomatiki musoro chigadzirwa chigadzirwa: Iyi 3 nylon otomatiki musoro unogadzirwa neEuropean neAmerican zinc alloy. Iyo kambani yapfuura ISO9001: 2008 mhando manejimendi sisitimu setifiketi.
3Nylon otomatiki musoro
1.3 Nylon otomatiki musoro chigadzirwa chigadzirwa
Iyi 3 nylon otomatiki musoro unogadzirwa neEuropean neAmerican zincalloy. Iyo kambani yapfuura ISO9001: 2008 mhando manejimendi manejimendi sisitimu.Iine akati wandei patents. Zvese zvigadzirwa zvakapfuura SGS uye zvakapfuudza kuongororwa. Isa mumusika, taura yakakwana chigadzirwa mhando manejimendi sisitimu, ichienderera ichivandudza dzakasiyana siyana Hardware uye softwarefacilities, uye shingairira kutora musika nehunhu.
2. 3 Nylon otomatiki musoro chigadzirwa maparameter (maratidziro)
Saizi yemukati yemukati: Kukwirira kwemuromo: 2.1MM
Upamhi hwemuromo: 4.3MM
Mucheka musono: 0.85MM
Base musimboti: 1.8 MM
3. Chigadzirwa maficha uye maficha e3Nylon otomatiki musoro
Iyi zinc alloy otomatiki musoro unonyanya kushandiswa muzvipfeko, muhomwe, machira epamba, matoyi, uye mukwende wepamusoro.
4. Chigadzirwa chigadzirwa che 3 nylon automatichead
5. Chigadzirwa chinogadziriswa che3Nylon otomatiki musoro
Kambani yedu yapfuura iyo ISO9001: 2008quality manejimendi sisitimu setifiketi, inoverengeka patent, inosuma acomplete chigadzirwa mhando manejimendi sisitimu, inoenderera inovandudza varioushardware uye software zvivakwa, uye inovavarira kutora musika nehunhu.
6.Kupaka uye kuendesa kwe3Nylon otomatiki musoro
Hot Tags: 3 Nylon otomatiki musoro, China, Wholesale, Bulk, Vatengesi, Vagadziri